Malunga neRecetín | Indlela yokupheka
Indlela yokupheka Ibhlog apho unokufumana uninzi lweendlela zokupheka zabantwana kunye nabo bangekho mncinci kangako, amaqhinga okupheka kunye nolwazi malunga nayo yonke into enxulumene nelizwe lokupheka.
Ukuba ufuna ukwazi yonke into eyenzekayo kwilizwe lokupheka Rhuma kwiimpapasho zethu nge-imeyile yakho, apho uya kufumana kwangoko zonke iiresiphi, amaqhinga okupheka kunye neendaba ezinomdla kakhulu.
Sithetha ngantoni eRetetín?
En Indlela yokupheka Uya kufumana iiresiphi zokuqala, okwesibini, ukuqala, iidizethi; Iiresiphi ezivela kwihlabathi liphela kunye namaqhinga abancinci ukuba bafunde ukutya yonke into.
Izihloko esithetha ngazo kwiRecetín zifumaneka kumacandelo ephepha lewebhu.
Siyabakhathalela abafundi ... kakhulu
Indlela yokupheka, ukongeza ekubeni ibhlog apho ungafunda kwaye ufunde malunga nokupheka iiresiphi, ikwajolise ekubeni sisango lokunceda abafundi bethu, indawo yokuphendula imibuzo kwaye ikuncede xa usenza iimenyu zabantwana, funda amaqhinga ukuze ube ukutya okunesondlo kunye nokonwaba ekhitshini. Unokwenza uluvo kupapasho, usithumelele iindaba, iingcebiso, amathandabuzo, umdla okanye iiresiphi zethu Unxibelelwano.
Zonke iiresiphi ezikhoyo kwiRetetin zenziwe zenziwe sithi Iqela lokubhala. Bonke ngabapheki abaneminyaka emininzi yamava belungiselela izitya ezilungiselelwe abantwana ngokukodwa, ngenxa yoko isiqinisekiso siphelele kubazali.
Uyithengisa njani inkampani yakho okanye imveliso eRecetín?
Ukuba inkampani yakho okanye imveliso inxulumene ngokuthe ngqo kwilizwe lokupheka, ungaqhagamshelana nathi nge Unxibelelwano Kwaye siya kuphendula ngokukhawuleza kunye nesindululo sentengiso esihambelana noko ukufunayo.
Ukuba ufuna ukunxibelelana Indlela yokupheka ungayenza nge Unxibelelwano.